ဦးဇင်းဘုရား တပည့်တော် မေးလျှောက်စရာလေး ရှိပါတယ်ဘုရား။ ဘုရားစေတီ တွေမှာ အောင်မြေဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စပါဘုရား။ အဲဒါ ဘုရားဟော ပိဋကတ်တော်တွေမှာ ပါ/မပါ သိပါရစေဘုရား။ အကျိုးထူးကွာခြားမှုလည်း သိချင်ပါတယ် ဘုရား။ ဦးဇင်း အချိန်ရရင် ပို့ရေးတင်ပေးပါရန် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဦးဇင်းဘုရား။
အင်း ဘုရားဟောထဲမှာတော့ ဦးဇင်းသိသလောက် အောင်မြေနေရာ သီးသန့်ဌာနတစ်ခုအဖြစ် ဟောကြားထားတာ မတွေ့ဖူးပါ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဗောဓိညောင်ပင်ရင်း၌ပင် ကိလေသာအားလုံးကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုဗောဓိညောင်ပင်မြေနေရာကို အောင်မြေဟု သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဘုရင်တစ်ပါးသည် သူစစ်အောင်မြင်နေရာကို သူ၏အောင်မြေဟု သတ်မှတ်သကဲ့သို့ ကျန်သောသူများသည်လည်း မိမိတို့ဆိုင်ရာ အောင်မြင်သော နေရာများကို အောင်မြေဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အဓိကအောင်မြေကတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ကိလေသာများကိုရော အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကိုရော အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဘုရားဖြစ်ရာ ဗောဓိညောင်ပင်မြေနေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမြေနေရာမှ မြေများကိုယူကာ မိမိတို့နေရာအသီးသီးသို့ ယူဆောင်ပြီး အောင်မြေနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
စာရေးသူတို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စေတီများတွင် အောင်မြေနေရာအဖြစ် သီးသန့်နေရာလေးတွေရှိတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီနေရာလေးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗောဓိညောင်ပင်မြေနေရာမှ မြေများကိုပွားယူ၍ ထားကြသည်ဟု သိရှိရပါတယ်။ ထို့အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လည်း ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သော ဗောဓိညောင်ပင်မြေနေရာကို အောင်မြေနေရာဟု ယနေ့ထိတိုင်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
ဒီနေရာဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓ ကိလေသာအားလုံးကိုရော အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကိုရော အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြေနေရာပဲဟု မိမိစိတ်မှာ ယုံကြည်ချက်ကြီးစွာဖြင့် ခြေနင်းကာ အလုပ်ကိစ္စ စာမေးပွဲကိစ္စတို့ကို ဖြေဆိုလုပ်ကိုင်လျှင် အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်းနှုန်း များနိုင်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓအောင်မြေက အောင်မြင်အောင် ဖန်တီးပေးခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူ။ မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွပြီး ဆန္ဒဦးဆောင်မှု အားကောင်းသောကြောင့် စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆို အလုပ်အကိုင်များ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ကိုင်ဖြေဆိုမည်ဖြစ်သောကြောင့် အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များနိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်တိုင်က စာလည်းမကျက် အလုပ်လည်း လုံလ၀ီရိယမစိုက်ဘဲ အောင်မြေနေရာနင်းရုံးနဲ့တော့ စာမေးပွဲလည်း မအောင်မြင်နိုင်သလို အလုပ်လည်း အဆင်ပြေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
အဲဒီတော့ အောင်မြင်နေရာကိုနင်းခြင်းသည် မိမိအတွက် စိတ်ဓာတ် လှုပ်ဆော်ပေးမှုနှင့် ဆန္ဒပြင်းပြမှုတို့သာ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါလိမ့်မည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က ကယ်တယ်ဖန်တီးရှင် မဟုတ်ဘဲ လမ်းညွှန်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်သောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးခြင်းသည်သာလျှင် အောင်မြင်ခြင်းအားလုံး၏ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်မှုကို မိမိတို့က လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး အားထုတ်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် မျက်မှောက်သံသရာမှာ အရားအားလုံး အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် အောင်မြေနေရာဟူ၍ ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် သီးသန့်နေရာ မရှိနိုင်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အယူအဆ မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ရာ ဗောဓိညောင်ပင်မြေနေရာကိုသာလျှင် အောင်မြေဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အောင်မြေနေရာကို နင်းရုံးဖြင့် အောင်မြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်း လိုပေသည်။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ကိလေသာအားလုံးနှင့် အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်သလို မိမိတို့သည်လည်း မျက်မှောက်ဘ၀မှာရော နောင်ဘ၀များမှာရော အစစအရာရာ အောင်မြင်ချောမွေ့အောင် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများကို နေ့စဉ်အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…..။
မိန်းကလေးများ ရှိခိုးတဲ့အခါ တဘတ်ပါရခြင်းအကြောင်းကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ မိန်းကလေးများ ပွဲလမ်းသဘင် တက်ရောက်ရာတွင် တဘတ်အသုံးပြုခြင်းကို ထောက်ဆကြည့်လျှင် တဘတ်သည် မိန်းကလေးများ၏ အဆင်တန်ဆာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားက လောကကြီးမှာ ပွင့်တော်မူနေပြီး တရားဓမ္မတွေ ဟောနေပါပြီ။ ဘုရား
လောင်းတုန်းက ဆရာတော်ဖူးတဲ့ “အာဠာရကာလာမ” နဲ့ “ဥဒက ရာမပုတ္တ” တို့က ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး
မပါတဲ့ ဗြဟ္မာ့ဘုံ ရောက်နေကြပါတယ်။ အာဠာရကာလာမ ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးက ဈာန်အဆင့် အားဖြင့်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:26 AM No comments:
လောကဓံတရား ရှစ်ပါးမှာ (၁) လာဘ = ပစ္စည်းဥစ္စာရခြင်း။ (၂) အလာဘ = ပစ္စည်းဥစ္စာရခြင်း။
(၃) ယသ = အခြွေအရံ ပေါများခြင်း။ (၄) အယသ = အခြွေအရံ မရှိခြင်း။ (၅) နိန္ဒာ = အကဲ့ရဲ့ခံရ
ခြင်း။ (၆) ပသံသာ = အချီးမွမ်း ခံရခြင်း။ (၇) သုခံ = ချမ်းသာခြင်း။ (၈) ဒုက္ခံ = ဆင်းရဲခြင်းတို့ဖြစ်
ရဟန်းတော်တွေကို ဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲ ဘုရား?။
ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို ဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲ ဘုရား” လို့ မေးလျှောက်ဖူးတယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:24 AM No comments:
အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများ၌ အတော်လေးကို သံသယဖြစ်နေကြပေသည်။ ရှေးရှေးသော လူကြီးများက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်မစီးနဲ့ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကဲ့သို့ ခြေဖ၀ါးကို ဓါးနဲ့ခွဲခံရမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖိနပ်မစီးရဲကြပေ။ သို့သော် ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် ခြေဖ၀ါးကို ဓါးနဲ့အခွဲခံရသည်ကိုတော့ သေချာကျနစွာ သိရှိနားလည်သူက နည်းပါးပေသည်။
မနောကံကြောင့် သီလပျက် မပျာက် ?
မေး။ ။ ကံသုံးပါးထဲတွင် မနောကံသည် အပြစ်အကြီးဆုံးဟု မြတ်စွာဘုရားမှ ဟောကြားထားသည်ကို မရှင်းလင်းပါသဖြင့် ဂရုဏာရှေ့ထား၍ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်၏ သာမာန်အမြင်မှာ ကာယကံသည် မနောကံထက် အပြစ်ကြီးသည်ဟု မြင်မိလို့ပါဘုရား။ စိတ်ဖြင့် ပြစ်မှားခြင်းသည် ကိုယ်ထိလက်ရောက် (ကာယကံမြောက်) ပြစ်မှားသည်လောက် အပြစ်မကြီးဟု ယူဆမိသောကြောင့်ပါဘုရား။
မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘ၀က တောထွက်ပြီး တရားကျင့်ပါတယ်။ တရားကျင့်တဲ့အခါ
ပထမ ဆရာမျိုးစုံထံ နည်းယူပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာကြီးတစ်
ဦးလည်းပါတယ်၊ ဥဒကရာမပုတ္တ ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတစ်ဦးလည်း ပါတယ်၊ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:54 AM No comments:
ရူပပထမဈာန် အင်္ဂါ၅ ပါး။
၁။ ၀ိတက် = မိမိနှင့်အတူတကွဖြစ်သော တရားတို့ကို အာရုံသို့ရောက်အောင် ပို့ပေးခြင်း။
၂။ ၀ိစာရ = ၀ိတတ်ပို့ပေးသည့်အတွက် အာရုံသို့ရောက်နေသော စိတ်အစဉ်ကို မကင်းကွာ
ရလေအောင် အဖန်ဖန် ဆင်ခြင်နေခြင်း။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:53 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုသည် အသက်သာ ငါးဆယ်ကျော်၍ ခြောက်ဆယ်နား ကပ်လာ
သည့်တိုင် မိမိ လူလာဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို သိသူအလွန်နည်း၏။ သိရန်လည်း
လေ့လာသုံးသပ်ကြပုံမရှိကြ။ မေးခဲ့လျှင်လည်း ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမှန်း မသိအောင် နှုတ်ဆွံ့
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:52 AM No comments:
တရားထိုင်ချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဥပါဒါန်ကံ
ဒါကြောင့်မို့ ဘုန်းဘုန်းက တရားထိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးချင်တာ။
တစ်နာရီ ထိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ် မဟုတ်လား။
ကဲ…. ထိုင်ကြပြီ၊ ရှုကြပြီဆိုပါတော့။ ကိုယ်တိုင်ကို ပြန်မေးကြရအောင်နော်။ ဟာကွက်လေး ကိုဖြည့်ကြ ရအောင်နော်။
သံသရာဝဋ်က လွတ်ကင်းဖို့ တရားဓမ္မတွေကို မြတ်စွာဘုရားက ဟောပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို
ဟောထားတဲ့ တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ လောက
မှာ လူဖြစ်လာသော်လည်း အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အများကြီးပါ။ သံသရာလည်နေ
ရှင်သီဝလိ မထေရ်မြတ်ကြီးသည် လာဘ်အရာ၌ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ထူး ချီးမြင့်ခံယူ ရရှိတော်မူသော
ရဟန္တာ အရှင်မြတ်ကြီး ဖြစ်ပါ၏။ အရှင်မြတ်ကြီးသည် ၀ိပဿီ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော်
ကတည်းက ဘုရားရှင်နှင့် သံဃာတော်များကို အလှူကြီးပေး၍ လဘ်လာဘ ပေါများသောအရာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:24 AM No comments:
ဆဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ(၄)။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:22 AM No comments:
ဘုန်းဘုန်းဘုရားတပည့်တော်နာမည်က မော်မော်မော်စန်းပါဘုရားအခုအသက်(၃၅) နှစ်ရှိပါပြီဘုရား၊ ရက်ရှည်အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ ရက်ရသလောက်လေးတရားစခန်းကိုဝင်ပါတယ်၊ အခြားရက်တွေမှာလဲ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်လေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဆွမ်းလောင်းပြီး ဘုရားရှိခိုး၊တရားနာတွေလဲ အချိန်ရတိုင်း ပြုလုပ်ပါတယ်ဘုရား။ အလုပ်နားရက်တွေမှာ သူများတွေလို ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ ပန်းခြံသွာတာတို့ကိုမလုပ်ပါဘူးဘုရား။
ဆဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩ၀ါဒဆောင်ပု...